Nanofiber membrance nke China na-arụ ọrụ nke ọma | E.Fine
Ọgwụ nje Alternative
Usoro eji eme njem
Namofiber akpụkpọ ahụ nkpuchi
Aquaculture N'ihi White oporo 96% Factory Price Potas ...
Tributyrin 60% ekspootu
Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate 98% maka loxoprofe ...
Ọnụ 98% Calcium Acetate ntụ ntụ
Betaine Hcl 95% Hydrochloride nwere akpa 800kg
Nnukwu Trimethylamine-N-Oxide Dihydrate 98% TMAO Cas N ...
Ndị na-emepụta ihe oriri nke calcium acetate Ahịa
Ezi nri acidifiers mmako potassium diformate 97%
Broiler Chinken ndepụta mmako Betaine Anhydrous 96% ...
Broiler Chinken ndepụta ọkwa Betaine Anhydrous 96% Fac ...
Glycocyamine ụdị amino acid pluripotent. Ọ bụ ...
Potassium na-esi mmiri ozuzo na-agbanwe agbanwe 97%
90% Nri ọkwa nri, Triglycerides With Butyric ...
Ọgwụ Ntanetị Nri Nri Tributyrin 95% N'ihi na ...
Azụ Ahịhịa Oporo Okpokoro kukumba Nri Bait Aquatic 98% ...
Cationic Etherification L-Carnitine Ihe CAS Mba ....
Nanofiber membrance dị elu
1. Nnukwu ike na -emegide ihe nke ọma, agaghị abụ ihe ịtụnanya gbasara iku ume iku ume
2. Ezi nzacha. Arụcha nke anụ ahụ na ntanetị abụọ, tinye ya na mkpụkọ nanofiber na akwa mere iji mezuo uru dị iche iche nke nzacha site na ntanetị.
3.Nanofiber ihe nwere nnabata na PM2.5, ntụ ntụ, nje na nje na-arụ ọrụ nke ọma, ọ na - enwekwa ihe dị mma na-egbochi nje na mmetụta ịgba ya.
4. Akụkụ ojii na oji bụ ihe elektrọniki elekere nke nanofiber
5. Nnukwu ikuku nke nanofiber akpụkpọ ahụ bụ 100-300 nanometers, ikuku nke akwa gbazee bụ 1-5 micrometers nke ugbu a na-achọpụta ihe na-agbaze akwa. Mmetụta nchedo a na-etinye na akpụkpọ anụ nanofiber dị mma, maka nje nje na nje coronaviruses nke akwụkwọ mpịakọta nke dị 100-100 dị.
Shandong Bluefuture Nanofiber membrance Nkpuchi
Ngwurugwu nanofiber na-arụ ọrụ dị na ya bụ ihe ọhụrụ nwere atụmanya mmepe buru ibu. O nwere obere aperture, ihe dị ka 100 ~ 300 nm, nnukwu mpaghara a kapịrị ọnụ. Ihe mejupụtara nanofiber emechara nwere njirimara nke ịdị arọ, mbara elu mpaghara, obere ikuku, ezigbo ikuku permeability, na-eme ka ihe ahụ nwee atụmanya ngwa ọrụ na nzacha, ihe ahụike, anaghị egbochi mmiri na ihe nchekwa gburugburu na ike ubi.
Nnukwu ikuku nke nanofiber akpụkpọ ahụ bụ 100-300 nanometers, ikuku nke akwa gbazee bụ 1-5 micrometers nke ugbu a na-achọpụta ihe na-agbaze akwa. Mmetụta nchedo a na-etinye na akpụkpọ anụ nanofiber dị mma, maka nje nje na nje coronaviruses nke akwụkwọ mpịakọta nke dị 100-100 dị.
Tinye nanofiber membranes na nkpuchi. Iji nweta nnyacha karịa, ọkachasị nzacha nke ọkụ anwụrụ ọkụ, mmanụ kemịkal. Dozie ọghọm nke ụgwọ adsorption nke akwa gbazee na ngbanwe nke oge na gburugburu ebe obibi yana ntinye nke ọrụ mkpocha. Kpamkpam tinye ọrụ antibacterial, iji dozie nsogbu nke oke ọnya nje na - egbochi ihe ndị na - egbochi nje ihe dị na ahịa. Mee ka nchebe dịkwuo irè ma na-adịgide adịgide.
Nkọcha nke ọma. Ntinye ihe eji eme aru na ihe eji eme aru nke okpukpu abuo, tinyere ngwooo nanofiber na akwa welt gha abia uru nke nhazi ihe di nkpa.
3.Nweta nsonaazụ ihe na-adịghị mma nke ihe dị na ahịa ahụ ka ọ nwee mmanụ mmanụ .Ahụtakwa ihe ọghọm akụkọ ihe mere eme nke mmanụ mmanu mmanu na enweghị mmanụ mmanu.
4.Chọpụta ọghọm nke c harge na - apụ n'anya na mmetụta adịghị mma nke owu na-agbaze
5.Ọ nwere ike itinye ọrụ ọrụ Anti-nje, mgbochi mkpali na deodorant
Previous: Usoro nri mgbakwunye ọzọ na-echebe Gritrointestinal Tract
Next: Antimụaka Anti-virus Nanofiber Membrance Mask
Ngwakọta mmanụ mmanu mmanu mmanu N95 N…
Anti-virus N95, N99 na-eji na-apị ụmụaka ...
Mmiri nzacha Myọcha mmewere - Nanofilam ...
Nanofiber Mebrane - ụlọ ọrụ pụrụ iche Prot ...
Nanofiber membrance dị elu KN95, N99 a…
Mkpuchi mkpuchi nanofiber nchebe
Okwu: Mpaghara ụlọ ọrụ (East nke Fumin Road) Economic Development Mpaghara, Linyi City, Shandong, China
Ekwentị: + 86-0531-87968538 ext 813
Ehi Nri Efrata , Ezi ndepụta nwekwara , 3-Hydroxy-N-Methyl-3-Phenyl-Pr , Nri mmako Betaine Hcl , nri mmako, Atụrụ nri , -